Egwuregwu Riot na-ekwupụta MMO site na Nzube Ọrụ | Gam akporosis
Egwuregwu Riot na-ekwuwapụta na ọ ga-arụ ọrụ na mobile MMO site na ọrụ ọrụ
N'ụtụtụ a anyi eweputala ezigbo MMORPG y bụ udi nke ịchọrọ ịgbakwunye Egwuregwu Riot. Ha ekwupụtala na akaụntụ Twitter ha na ha ga-arụ ọrụ na MMO nke ga-erukwa ma gam akporo na iOS.
Maka ndị na-amaghị onye Egwuregwu Riot bụ, anyị na-ekwu maka ndị okike nke LOL na Njikọ nke Akụkọ Ifo: Wild Rift, otu n'ime MOBAs par tozuru oke nke eGames. Anyị ga-amata ụfọdụ nkọwa gbasara MMO ọhụrụ a na etu esi kwuwaa ya.
Greg Street, Onye isi oche nke Ntụrụndụ na IP maka Egwuregwu Riot, ekpughere na tweet ndị na-arụ ọrụ na MMO (Massive Multiplayer Online or Massive Multiplayer Online) na ndị na-ewe ndị mmepe ọrụ ịmalite ịmalite ọrụ ahụ ugbu a.
Dị ka Street onwe ya kwuru, ọ bụrụ na ha ewerela akaụntụ Twitter na mberede iji kpọsaa mkpa maka ndị mmepe maka MMO ọhụrụ ha, ọ bụ n'ihi na ọ ga - adị "nnukwu" (ndị a bụ okwu ha) ma ha chọrọ ọtụtụ ndị mmepe iji rụọ ọrụ na ya; nke mekwara ka o doo anyị anya na enweghi ndị mmemme na-adị taa na dịka anyị kwurula na ọ bụ aka ọrụ nke nchekwa ọrụ na ụfọdụ posts).
Anyị na-ewu MMO ma anyị na-ego ọrụ!
Nke a bụ usoro a na - adịghị ahụkebe n'ihi na anyị ga - achọ ọtụtụ mmadụ, anyị makwa na enwere ọtụtụ mmasị, yabụ ị nwere ike iji njikọ a gosipụta mmasị gị ọbụlagodi na anyị enweghị ọrụ oghere maka gị.https://t.co/CF53hsARWE
- Greg Street (@Ghostcrawler) February 22, 2021
Site na njikọ ha na-enye, anyị nwere ike ịmata ihe ha na-achọ:
Nka na ụzụ egwuregwu kere III maka mobile
Onye ọrụ ahụmịhe onye ọrụ maka ekwentị
Ihe achọrọ dị mkpa iji nwee ike ịrụ ọrụ na Los Angeles ga-arụbu ọrụ na MMOYabụ ọ bụrụ na inwere ahụmịhe ahụ, ị ​​maara nke ọma na Bekee ma ịchọrọ ịnwale ikuku ndị ọzọ, echefula oge ịbanye ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eto dị ka ụfụfụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu Riot na-ekwuwapụta na ọ ga-arụ ọrụ na mobile MMO site na ọrụ ọrụ
A na-akpọ Realme Narzo 30A na Realme Narzo 30 Pro 5G na nnukwu batrị na gam akporo 10